Shukri Cabdi: Gabadhii biyaha ku dhimatay hooyadeed oo booliska eedeysay - BBC News Somali
Shukri Cabdi: Gabadhii biyaha ku dhimatay hooyadeed oo booliska eedeysay
Lahaanshaha sawirka Sawir uu qoyska leeyahay
Image caption Shukri waxay dhimatay 27-kii bishii Juun
Hooyo Soomaali ah oo dhashay garab 12 jir ah oo dhimatay wabi ayaa sheegtay in laamaha booliska uu ka dhex jiro nidaam cunsuri ah, sidaas awgeedna qoyskeedu aysan waligood ogaan doonin sida ay ku dhimatay gabadhooda.
Shukri Cabdi ayaa 27-kii bishii Juun ku geeriyootay wabiga Irwell ee ku yaalla deegaanka Bury oo ka tirsan magaalada Greater Manchester, ee dalka Ingiriiska.
Qoyska ayaa sheegay in boolisku ay ku guul darreysteen sameynta baaritaanno buuxa oo ku aaddan dhacdadaas isla markaana ay siyaabo kala duwan ugu hanjabeen, iyagoo sida ay sheegeen lagu gacan bidixeynayo jinsiyadda ay asal ahaan kasoo jeedaan.
Xafiiska madaxa bannaan ee howlaha ay qabtaan booliska ayaa iminka wada baaritaanno.
Taliska ciidamada booliska ee ka howl gala magaalada Greater Manchester ayaa horay u sheegay in dhimashada gabadhaas ay ahayd "Dhacdo musiibo ah" isla markaana iyagu aysan aaminsaneyn inuu jiray wax laga shakin karo.
Waxay saraakiishu hadda u sheegeen BBC-da inay "wali baaritaanno wadaan".
Booliska 'oo naxariis lahayn"
Image caption Hooyo Zam Zam ayaa sheegtay in boolisku ay si adag ula dhaqmeen
Shukri hooyadeed, Zam Zam Tuure ayaa BBC-da u sheegtay in maalintii ugu horreysay ee ay booliska ku wargalisay maqnaanshaha Gabahdeeda aysan si deg deg ah uga fal celinin.
Qiyaastii 10 saacadood ka dib, ayaa sida ay sheegtay lagu soo wargaliyay in la helay meydka gabadheeda, balse waxay booliska ku qeexday inaysan "naxariis lahayn".
Waxay sheegtay inay ula hadleen "si adag", ayna "isku dayayeen inay ku qanciyaan in gabadheedu ay wabiga ku dabaalaneysay", inkastoo qoysku ay sheegeen inaysan sidaas aaminsaneyn, maadaama Shukri aysan garaneynin sida loo dabaasho.
Sidoo kale waxay sheegeen inay xirneyd dhar islaami ah oo ay ku wada xirnaa, sidaas darteedna aysan macquul ahayn "inay dabaal haweysato".
Qareenka u doodaya qoyskan oo lagu magacaabo Attiq Malik ayaa sheegay "in saacado gudahood" geerida Shukri ka dib ay boolisku qabteen shir jaraa'id oo ay ku sheegeen inuusan jirin wax laga shakin karo.
Wuxuu ku doodayaa in tallaabadaas la qaaday xilli hore oo aan waqti la siinin hubinta caddeymaha iyo raadadka muujin karay waxyaabo kale oo ay macquul tahay inay dhacdadaas sabab u ahaayeen.
"Qoysku waxay aad ugu adkeysanayaan in sida loola dhaqmay ay ahayd cunsurinnimo, haddii gabadhaas ay meelo kale kasoo jeedi lahaydna ay arrintu xasaasi noqon lahayd baaritaanno bandanna la sameyn lahaa", ayuu yiri.
Nidaamka cunsuriga ah ee ay ku qeexeen booliska ayuu ku micneeyay sida ay askartu u dhaqmeen iyagoo aan xitaa waxba kala hubsanin.
Image caption Shukri ayaa ku dhumatay wabiga River Irwell
Sheegashada qoyskan ayaa waxaa hadda baaraya guddiga dabagalka ku sameeya howlaha ciidamada booliska, oo magacooda loo soo gaabiyo IOPC.
Mas'uuliyiinta IOPC ayaa bayaan ay soo saareen ku yiri: Cabashooyinka noocan ah wxaan u wajahnaa sida ugu xoogga badan, waxaana ognahay in booliska magaalada Greater Manchester ay ka war hayaan mas'uuliyadda saaran IOPC oo ah inay dabagal ku sameeyaan tallaabooyinkii la qaaday markii lasoo tabiyay maqnaashaha Shukri - taasina kama hooseyso baaritaan la xiriira kalsoonida shacabka".
Hooyo Zam Zam ayaa sheegtay in gabadheedu aysan ku faraxsanaan jirin aaditaanka Iskuulka, ka hor inta aysan dhimanin.
Waxay sheegtay in iyada lafteedu ay "marar badan" soo tabisay in ciyaal kale ay ku dhibeen Iskuulka dhexdiisa.
Maamulka Iskuulka ayaa warbixin u gudbiyay qoyska, laakiin Mr Malik ayaa sheegay in waxa ugu muhiimsan ee ay sheegeen uu yahay "inaysan ka warqabin dhib gabadha loogu geystay Iskuulka gudihisa".
Wuxuu sheegay in maamulka Iskuulku aysan wax wareysi ah la yeelanin Shukri hooyadeed, inkastoo ay marar badan ballan qaadeen, taasoo uu ku tilmaamay mid muujineysa inaysan baaritaan dhab ah sameynin.
Bayaan uu soo saaray maamulaha Iskuulka Paul Greenhalgh ayaa lagu sheegay "in aad looga naxay warka ku saabsanaa geerida Shukri"